လူမျိုးရေး မခွဲခြားစေလို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လူမျိုးရေး မခွဲခြားစေလို
Posted by ဒိုးစနစ္ on Jun 27, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 28 comments
ယခု မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော..
လူမျိုးရေး ပြသနာများတွင် မည်သူမှားသည်။ မည်သူမှန်သည်ကို အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါသည်။
ထို့အပြင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမူများလည်း လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို ရံဖန်ရံခါတွေ ့မြင်ရခဲ့သည်။
အဓိက ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်သည်မှာ မည်သည့် ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူဖြစ်စေ..မည်သူ့လူမျိုးပင်ဖြစ်စေ..
အားလုံးသည် လူများဖြစ်ကြသည်။ လူအချင်းချင်းလေးစားထိုက်သည်။
ထို့သို့မဟုတ်ပဲ..ယခု အဲဒီလူမျိုးတွေကို မနှစ်သက် မလိုချင်သောကြောင့် တိုင်းပြည်မှ မောင်းထုတ်မည်ဆိုလျှင်..
ထိုသူတို့အား … ငြိုငြင်ခဲ့ပါလျှင်…
၂) ဒန်အိုး ဒယ်အိုးအဟောင်း အစုတ်ဝယ်သော..
အသားစုံမစားနိုင်သော သူများအား ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှ မောင်းထုတ်ခဲ့ပါက..
ခေတ်အဆက်ဆက် မည်မျှပင် ဆင်းရဲနေစေကာမူ မြန်မာလူမျိုးများသည်ကား..ထိုကဲ့သို့ အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့် စိတ်ထားကြီးမြတ်သော မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် လူမျိုးရေး မခွဲခြားစေလိုပါ။
လူမျိုးရေ မခွဲခြားသလို လူ့အခွင့်အရေးလည်း ချိုးဖောက်နေတာ မဟုတ်ပါ..။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား အတွက်ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒိုးစနစ် က အဲ့ဒီ့ ဒေသ နေသူများလား ..
ကျွန်တော်လည်း စစ်တွေဈေး မှာ အောက်ခြေ အလုပ်တွေလုပ်မဲ့ သူ မရှိလို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရပါတယ်ဆိုပြီး အော်သံကြားမိနေလို့ပါ။
အင်း နာဒို့အိမ်မှာ မိလ္လာပိုက်ပျက်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ တစ်ကောင်လောက်ခေါ်ခိုင်းအုံးမှပါ
ဥပဒေသည်သာအဓိကကျပါသည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်း ဆိုသည်မှာစွတ်စွဲချက်တခုသာဖြစ်ပါသည်။ ဒါကိုငြင်းခုန်နေရုံမျှဖြင့် မပြေလည်နိုင်ပါ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးလာလျှင် ပြသနာများအားလုံးဖြေရှင်းပြီး သား ဖြစ်မှာပါ။ အခွင့်အရေးပိုလိုချင်လဲမရပါ။ လျှော့လိုချင်လဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပဒေနှင့်မိမိမည်မျှအကြုံးဝင် သည် ပေါ်မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကွာခြားသွားပါလိမ့်မည်။ ဥပဒေဖြင့်သာ အဆင့်အတန်း ခွဲပါမည်။
ဟာသ ဟု ထင်ရသော်လည်း အမှန်လိုအပ်ချက် ဖြစ်နေပါသည်..။
နိုင်ငံတိုင်းအတွက် အောက်ခြေ သိမ်းလုပ်သား အမြဲလိုအပ်နေပါတယ်
ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သော်လည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက ၎င်းအလုပ်ကို သိမ်ငယ်သည်ဟု
ထင်မြင်စေလျှက် လုပ်ကိုင်လိုစိတ် မရှိကြပါ..။
သူတို့ ပြန်သွားရင် ဒုက္ခ…။
နံပါတ်စဉ် တစ်ကနေ ကိုးအထိအလုပ်တွေကို
ဖန်တီးရှင် က ရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်မည်
အသင် ဒိုးစနစ် နာခံစေ ။
မင်းတို့သိထားဘို့က နေလို့ရတယ် စည်းကမ်းရှိရှိနေသင့်တယ် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တို့တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးစုထဲမှာမပါဘူး.. မြန်မာ့မြေပုံ ရခိုင်နယ်ကို ရိုဟင်ဂျာပုံထည့်ထဲက
ရနောင်မှာကြည့်ပါလား ရနောင်ထက်ဝက်လောက်ရှိတယ်၊ ဒါကိုထိုင်လူမျိုးမနေနိုင်အောင်
မလေးမှာလြဲမန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးဘဲ လုပ်ကိုင်စားနေကြတာဘဲ လူမျိုးရေးတွေ
ဘင်္ဂလာမှာကောကြည့်လိုက် ရခိုင် တွေသန်းနဲချည်ရှိတယ် ခွဲခြားဖိနှိပ်ရရင် သေလိုက်
ယခုလဲ သဘာဝဓါတ်ကြောင့်ငွေရတာမြင်တော့ ရခိုင်ပြည်ခွဲထွက်ခြင်တဲ့ (ရခွေးသွေးကြွ
ခံနေရတာရခိုင်တွေပါအော်လိုအော် မြို့တွေအားလုံးမှာ မွတ်ဆလင်ဗလီတွေဖျက်၊
ထုတ်၊ လုပ်နေတာ (ရခွေးတွေဘဲ) ပြီးတို့ခံနေရတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်(ရခွေး)ပါလို့လိမ်ပြော
ရခွေးတွေဘဲ ၊တကယ့်ဒုက္ခသည် အစစ်တွေကတော့လမ်းဘေးမှာအခြေအနေမဲ့ဘဲ ၊
တကယ်တောင်းနေတာက ရခွေတွေ ရခွေးသမ္မတနိုင်ငံထောင်တာမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ဘင်္ဂလီတွေ၊မွတ်ဆလင်တွေကိုခုတုံးလုပ်ဆွဲထည့်နေတာ၊
မြန်မာတွေလည်း သူများနိုင်ငံမှာ သွားနေတယ်..
အဲလို လူသတ် မုဒိန်းကျင့် လုပ်သလား??
တိုင်းပြည်မရှိလို့ သူများတိုင်းပြည် ဝင်ခိုလှုံတယ်…
နားမလည်သူကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးတာ ကောင်းပါတယ် ကိုရင်မောင်
ကိုရင် ဒိုးစနစ် နားလည်အောင် ကြိုးစားပေးပါ
စာရေးသူ ဆိုလိုသော အဓိပ္ပါယ်နှင့် စာဖတ်သူတို့ နားလည်သွားသော အဓိပ္ပါယ် ကွဲပြားနေသည်ကို ရှေးဦးစွာ
စာရေးသူ ကျွန်တော်သည် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး သင်္ကန်းကုန်သည်မျိုးရိုးဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူဆိုလိုချင်သည်မှာ..မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် ထို.ဝက်သားမစားသူများအား..မောင်းထုတ်လိုက်ပါက..
ယင်းကဲ့သို့ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်များကို မြင့်မြတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေလုပ်ကိုင်နေရမည်ဟုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ထိုအလုပ်များလုပ်ဖို့ရာ သူတို့လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါလား…
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပ်အထင်ကြီးမနေပါနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ မွတ်ဆလာမ်လူမျိုးတွေ
အဲဒါတွေအတွက် သူတို့ကို တကယ် လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လဲ …
ရတာကနဲနဲ … ပေးရတဲ့အရင်းအနှီးက ကိုယ့်နှမတွေ အမတွေ …
သူတို့(ဘင်္ဂလီများ) ကအောက်ခြေအလုပ်မလုပ်ပါ။မြန်မာတွေသာ သူတို့ရဲ့အောက်ခြေအလုပ်သမားဘဝရောက်နေရတာပါ။ဥပမာ ရှိုင်းဆောက်လုပ်ရေး၊နိုင်းဂရုဆောက်လုပ်ရေးဟာ ဘင်္ဂလီတွေပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပါ။ဒါဟာကျော်ကြားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘဲ နောက်အများကြီးပါ။သူတို့(ဘင်္ဂလီ)ကို ထောက်ပံ့ပေးနေကြတာပါ။မြန်မာတွေသာ မသိမသာကနေ သိသိသာသာကြီး သူတို့ခိုင်းဖတ်ဖြစ်သွားတော့မယ်
မုဒိတာပွား၍ မေတ္တာရှေ ့ထားကြပါကုန်။
နောက်နေ ့ကြမှ ၊ ဆရာပီမိုးနင်း ရဲ ့စာအုပ်ကို ဒဲ့ကူးပြီး လာတင်ပေးပါအုန်းမယ်ဗျာ ။
မသိသူ ကျော်သွား သိသူ ဖေါ်စား ဆို သကိုး ဗျ အာ ဟ အာဟ
အင် ဘာဆိုင်လို ့တုန်း ကိုဒေဝရေ။
ဘယ် သူတောင်းစားကများ ခွေးများနှယ် နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက် အနီပေး
နေပါလိမ့်။တော်တော်အားယားနေရင် ငါ့ဖင် ချေးလာဆေးပေးလှည့်ကွာ။
လူလူချင်းတူပေမယ့်..အတွေးအခေါ် အပြုအမူ အကျင့်စရိုက်တွေအရ လူ့ဆင့်အတန်းဟာ မတူတော့ဘူး
(လူလူချင်းလေးစားပါတယ်ဆိုပြီး…သူခိုး ဓါးပြ မုဒိန်းကောင် လူသတ်ကောင် စသည့် လူအသိုင်းအဝိုင်းကို
ဒုက္ခပေးတတ်သော သူယုတ်တို့ကိုရော လေးစားပါမည်လား။)
လူမျိုးနဲ ့အလုပ် ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ဝက်သားတုတ်ထိုး၊ အီကြာကွေး၊ စမူဆာ၊ ချာပါတီတွေကို မြန်မာတွေ ရောင်းနေကြပါပြီ။
မုန် ့ဟင်းခါး၊ မုန် ့တီ၊ ဘိန်းမုန် ့တွေကို လူမျိုးခြားတွေ ရောင်းနေကြပါပြီ။
မြန်မာတွေ လူမျိုးခြားဆီမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ကြသလို၊
လူမျိုးခြားတွေ မြန်မာ လူမျိုးမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေကြပါပြီ။
ပြောတော့ လူမျိုးရေးမခွဲခြားနဲ့ တဲ့ ..
ရေးထားလိုက်တာ ဒီလူမျိုးတွေပဲ ဒါ မျိုးလုပ်ပါတယ်တဲ့ လားးးး
မှားနေပီနော် ….အဲလိုမခွဲခြားနဲ့လေ ..
ဘယ်အလုပ်မဆို ဘယ်နေရာမဆို လူမျိုးစုံ နေကြ လုပ်ကြတာပါ …
ဒါဆိုမကြာခင်ကအဖြစ်တစ်ခုပြောပြမယ်၊ ဂျပန်မှာ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက်ကို မြန်မာနှစ်ယောက်က မုဒိန်းကျင့်ပြီးသတ်ခဲ့တာ ၂-၅-၂၀၁၂ နေကဘဲ ဂျပန်က မြန်မာတွေအားလုံးမောင်းထုတ်ရမှာလာ၊
ဂျပန်ဆာမူးရိုင်ဒါတွေသွေးပြီး ခုတ်သတ်ရမှာလား မောင်ရင်နားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ်
ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဝင်မဆို လူကောင်းရှိသလို ၊လူဆိုးရှိကြတာဘဲ လူဆိုးတစ်ယောက်ကြောင့်တစ်မျိုးနွယ်လုံ၊ဘာသာတစ်ခုလုံးလိုက်ပြီရန်ရှာနေကြရင်ကမ္ဘာမှာဘယ်လိုနေ
မကြာခင်က ရန်ကုန် လမ်းမတော်မှ မရှုကျင်ခေါ်တဲ့ တရုပ်မလေးကို မုဒိန်းကျင့် လူသတ်တာကို မြန်မာတွေ
လုပ်ခဲ့တာဘဲ ။ဒါဟာတရုပ် ဗမာပြသနာလား မရှုကျင်နဲမောင်ဌေးတို့ပြသနာလား မောင်ရင်တို့ခွဲခြားနားလည်သိမြင်ရမယ်။ မဟုတ်ဘဲအားလုံးလျှောက်ရမ်းနေရင်လက်စားချေမှုတွေ၊သတ်ဖြတ်မှုတွေဘယ်တော့မှမဆုံးဘူး။
တခါထဲပြောလိုက်အုံးမှာ ထိုင်းမလေးတစ်ယောက်ကို ၅-၆-၁၂ ရက်နေ့ကရနောင်းမှာ မြန်မာလုပ်သား ရယောက်ဝိုင်းမုဒိန်းကျင်ြ့ပီး အလောင်းဖျောက်ခဲ့ကြတယ်၊ ဗမာထိုင်းလူမျိုးရေးတွေ၊ဘာသာရေးတွေ၊နောက်ခံရာဇဝင်တွေနဲဆိုရင်ဘယ်ပြသနာရှင်လို့ပြီးတော့မလဲ
အရေးယူ မဆိုင်တဲ့အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ မိဘတွေ၊ညီအကိုမောင်နှမတွေ၊ဘာသာတွေ၊လူမျိုးတွေ၊ဘုရာကျောင်းတွေနဲဘာဆိုင်လို့လဲ
လုပ်ခဲ့တာဘဲ ၊တစ်မျိုးလုံး၊ဘာသာတစ်ခုလုံးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ ၊မောင်ရင်တို့ ပညာမျက်စိနဲကြည့်ပြီးအမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်ပါစေ၊ဝါးလုံးချည်းသုတ်ပြီးရမ်းနေရင်အထင်မှတ်တဲ့ပြသနာတွေဆင့်ကဲဆင့်ကဲဝင်လာတတ်တယ်
ဒီကြားထဲ ရွှေရင်အေးသည်ကပါသေး … အဟေး ဟေး …. ။
ဘာမှကို မပြောချင်တော့ဘူး … မည်းမည်းဆို ဆံပင်တောင်မထားချင်တော့ဘူး … ဥပက္ခာပြုထားတာ တစ်ဆယ်မက်လို့ ဝင်လာတာ …
စိတ္တေ န နိယ တေလော ကော ။ပု တု စနော ဥမ္မ တကော တဲ့ ။ကြိုက် သလို ယူ ပါ ၊ဆိုင်သလို တွေးပါ
အဲ- အဲ ့- အူး—–။မောလိုက် တာ